Falastiin: guryaha Israel dumisay tan iyo 1967kii (Warbixinta Land Research Centre) – Kasmo Newspaper
Updated - March 19, 2018 9:37 pm GMT
London (kasmo), Laga soo bilaabo sannadkii 1967, dagaalkii 6da maalmood, Israel waxay si ulakac ah u duminaysay guryaha reer Falastiin ee bariga Jerusalem.
Sida ku cad warbixinta LRC (Land Research Centre), Urur Ngo ah oo dusha kala socda xadgudubyada Israel, dhismayaasha ilaa hadda la dumiyay waxay gaarayaan 5,000 oo guri; waxaa kale oo baarista lagu sheegay in sannadku markuu ahaa 1967, barakacayaal reer Falastiin ah oo gaaraya 70,000 ku noolaayeen Jerusalem.
Xilligaas ka hor, sannadkii 1948kii, ciidammada Israel waxay magaalada barakaysan si khasab ah uga saareen dad reer Falastiin ah oo gaaraya 198,000 oo qofood.
Qaar iyagaas ka mid ah waxay dhulkaas ka baxeen intii ka horreysay bilowga dagaalkii Carabta-Israel ee 1948kii, waxaana xigtay in ugu yaraan 16,000 oo Yuhuud ah la wareegaan guryohoodii.
Burburinta guryaha reer Falastiin waxay sii socotay xitaa sannadadii dambe oo idil: intii u dhexaysay 2000-2017 waxaa la dumiyay ilaa 1,706 guri, taasina waxay sababtay barakaca 9,422 qoys oo 5,163 carruur ah ku noolaayeen.
Sida dokumentiga lagu xusayo, Israel waxay guryaha Falastiinta u dumisaa si ay ula wareegto Jerusalem, iyada oo marmarsiinyo Ka dhiganaysa arrimaha ruqsadaha.
Sababta ugu badan ee dhismooyinka badankooda loola wareegay waa iyada oo ruqsadihii hawlaha dhismada laga waayay dhanka xukuumadda Israel.
Sidaa darteed, xafiiska Q.M. ee Arrimaha Aadamiga, ‘ UNOCHA’ (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs),wuxuu 15kii March shaaca ka qaaday in 2dii bilood ee u horreeyay 2018ka, mas’uuliinta Israel dumiyeen ama la wareegeen 70 goobood oo 36 ka mid ah bariga Jerusalem oo qur ah ku yaallaan.
Sida ku xusan warbixinta LRC, duminta iyo la-wareegidda dhismooyinka reer Falastiin ee Jerusalem waxay culeys ku keeneen dadka sidii ay guryo cusub u dhisan lahaayeen, 3 sababood dartood.
Midda 1aad waa iyada oo la oggolaado tiro aad u yar oo Ka mid ah codsiyada ruqsadaha. Sida ku cad xogta Q.M. intii u dhexeysay 2010-2014 waxaa la oggolaaday oo qur ah 1,5% codsiyadii ruqsadaha ee la soo gudbiyay.
Sababta 2aad waa sicirka sarreeya ee ruqsadaha, qiimaha 1kii guri wuxuu gaarayaa $30,000 oo Dollar. Midda 3aadna waa iyada oo 12% oo qur ah, dhulka Falastiinta ee bariga Jerusalem, loogu talagalay magaaleyn, halka 7% loogu talagaly guryo la dego (Residential).
Intaa waxaa dheer in xilligaan la joogo, qiyastii Kala bar dadweynaha Falastiin ee dhulka ku sugan ku noolyihiin guryo aan ruqsad lahayn, taas oo halis joogto ah u galinaysa in ay barakacayaal noqdaan.